Rirma qabsaawaa fakkaattee qabsoo Oromoo keessa galee hidda ciraa ture – Welcome to bilisummaa
Rirma qabsaawaa fakkaattee qabsoo Oromoo keessa galee hidda ciraa ture
bilisummaa August 17, 2016	3 Comments
Previous Stockholm syndrome : Who builds tunnels, hospitals, military camps and modern technology underground in Tigray
Next ‪#‎OromoProtests‬ ‪#‎AmharaProtests‬ Joint Solidarity Rally in Chicago
Abboo fayyaa tahi; jiraadhu. Yohannes Lata Lammeessaa nu gurguratuu deema. Namuu waan kana beekuu qaba.
Oddu odessun salphadha. Kan ta’e jeetu irra hin attii oddesitu iyyuu diigama oromo male jalala oromo gidutti hinfiduu. Yoo qabsaa taate dhaqi qeerroo wlain qabasai oddu dhisitti
Seenaa beektu hunda duubaa kaasii uummataaf ibsi. Kan hanga ammaa dubbatte bareeda ta’us Ibsa kee keessatti gaaffiin baayyeen deebii malee hafaniiru. Wanti irraa hambistu hin jiraatin. Eenyuu sayibban Dr. Bagaashawu? Israa’eel eenyuun faa leenjiste? maalif isra’el waa’ee kana keessa galte? Amaarri nurraa nyaachufi nuun saboota hafan qabatee akka duriitti seenaa akaakayyuufi abaabilee deebisuuf halkanii guyyaa hojjetu. keenya maalif kan jaallan Oromiyaa Walaboomte uumuf qabsoo irratti kufan galmaan gahuuf hin hojjenne?